Tag: ọkụ | Martech Zone
Ihe oru ahia na usoro
Fraịde, Machị 2, 2012 Douglas Karr
Otutu ndi ahia anyi choro igha akwukwo ozo mgbe anyi no n’ime ha. Ha na ndị na-ere ahịa ha arụ ọrụ ka ha na-azụ ahịa maka ngwa ahịa. Ha choro itinye ihe n’ahịa, onu ahia na ebe ndenye ego. Anyị emeela ọrụ azụmaahịa n'oge gara aga ma anyị na-ezere ha ugbu a. Ọ gwụla ma anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ọrụ iji kwado ọtụtụ iterations, anyị na-apụkarị na azụmahịa ahụ. Anyị, kama, na-arụ ọrụ na ndị ahịa anyị na-aga n'ihu na-aga n'ihu
Monday, October 25, 2010 Wednesday, October 29, 2014 Douglas Karr
Anyasị a bụ nnukwu abalị nọrọ na ụfọdụ ndị maara nke ọma ahịa, ọrịre na ahịa ọkachamara. A kpọbatara anyị n'otu ụlọ oriri na ọ niceụ veryụ mara mma nke ukwuu n'otu ọnụ ụlọ nke onwe. Ebumnuche nke nzukọ ahụ bụ iji nyere onye ọrụ ibe m aka nke chọrọ ịkwalite azụmahịa ya n'ọkwa ọzọ… ma ọ bụ ọkwa ole na ole gafee ebe ọ dị ugbu a. Enwere otutu nkwekọrịta n'ime ụlọ… chepụta ihe ọ bụ na ị na-eme
Izu ole na ole gara aga, amalitere m ịgụ Nnukwu Mgbanwe nke Nicholas Carr dere. Nke a bụ otu ihe si na saịtị ahụ nwụrụ anwụ: Otu narị afọ gara aga, ụlọ ọrụ kwụsịrị ịnwe ike nke aka ha na injin ụgbọ mmiri na dynamos ma tinye n'ime grid eletrik ọhụrụ ahụ. Ike dị ọnụ ala nke ndị ọrụ eletrik na-amịpụta agbanweghị etu azụmaahịa si arụ ọrụ. O setịpụrụ usoro mgbanwe nke mgbanwe akụ na ụba na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke wetara ụwa nke oge a